Ny Resak’ireo Salvadoriana Biloagera Momba Ny Faha-15 Taonan’ny Fifanarahana Fandriampahalemana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2017 5:07 GMT
Ny 16 Janoary 2007 no nanamarika ny faha-15 taonan'ny nanasoniavana ireo Fifanarahana Fandriampahalemana tao Chapultepec izay namarana ny ady an-trano nandritra ny 20 taona tao Salvadaoro (El Salvador). Fankalazàna ofisialy, kaonferansa, famoriana vahoaka ary hetsipanoherana, samy nanamarihana ilay hetsika avokoa ireo. Manana betsaka holazaina ireo bilaogera ao El Salvador raha momba ireo hetsika sy ny fandrosoan'ny firenena. Ny fampanantenana tsy tanteraka no lohahevitra ankapobeny teny anatin'ny tontolon'ny bilaogy salvadoriàna.
Jjmar, izay manoratra ao amin'ny bilaogy Hunnapuh, dia tsy maniry ny hanamaivànana ny dikan'ireo Fifanarahana Fandriampahalemana ka mamaritra izany ho toy ny fototra ho an'ny fanavaozàna manandanja ara-pomba demaokratika ny politika (es) ao anatin'ny tantara maoderin'i El Salvador. Fifanarahana manokatra varavarana ho an'ny firoboroboan'ny demaokrasia izay miantoka ny zo ara-politika ary manokana habaka ahafahana manova ny FMLN hiala amin'ny fanaovana ady anaty akàta ka ho lasa antoko politika iray, ary napetraky ny firenana ny Mpanelanelana amin'ny resaka Zon'Olombelona. Saingy ao anatin'ny fiainana sosialy sy toekarena ao amin'ilay firenena, mbola ahitàna fahabangàna goavana ireo fifanarahana. Tsy nofoanan'ireo Fifanarahana Fandriampahalemana ny rafitra ara-tantaran'ny fiarahamonina Salvadoriàna izay nanome vàhana ny fifandirana mitam-piadiana.
Ho anjara birikiny, mampiaiky volana i Ixquic hoe ao anaty firenena iray bitika toa an'i El Salvador dia misy fomba fijery samihafa mivelatra be tahàka izany (es) momba ny toejavatra iray ihany. Raha manamarika izy hoe tsy nahavita nampitsahatra ny habibiana ireo Fifanarahana Fandriampahalemana, nisy ny tsy fahombiazana tamin'ny fanamafisana rafitra iray vaovao ara-tsosialy, politika ary toekarena.
Maro no mahta hoe tsy fahombiazana ny fomba fitondra atao an'ireo miaramila sy mpiady anaty akàta fahiny. Juan Jose Dalton, mpanao gazety, no maneho ny heviny momba ireo Fifanarahana Fandriampahalemana, miaraka amin'ny tantaran'i Bernardo Menjivar (es). Fony izy vao 11 taona, nibodo ny vohitra nonenan-dry Bernardo ny tafi-panjakana, tany amin'ìlay faritany be tendrombohitra ao Chalatenango ary nanao vonomoka an'ireo olona tao, isan'ireny ny reniny, ny anabaviny ary dadatoa sy ny zanany. Hatramin'izany fotoana izany, lasa mpitondra hafatry ny herin'ny mpiady anaty akàta FMLN izy, mpampita hafatra ho an'ny andaniny sy ny ankilany. Teo amin'ny faha-16 taonany, namoy ny tongony roa izy noho ny fipoahana teny amin'ny kianja nisy vanja nilevina. Iray tamin'ireo olona nanam-bitana izy na izany aza. Teo ambany fikarakaràn'ny Vokovoko Mena Iraisampirenana no niafaràny ary taty aoriana dia nalefa tany Kiobà, toerana nahazoany fikarakaràna, fanarenana ary fanabeazana sy fanofànana tamin'ny farany.
Sambatra no nahitàn'i Bernardo ny tenany raha oharina amin'ireo bekotro maroholatra tratry ny fahasembanana nateraky ny ady, na avy amin'ny tafika izany, na avy amin'ireo mpiady anaty akàta fahiny. Tsy mbola tanteraka ny fampanantenana nentin'ireo Fifanarahana Fandriampahalemana, mba hamerenana azy ireny ho anaty fiarahamonina sy hahazo fanofànana, hoy i Bernardo sy Dalton.
Taorian'ireo fankalazàna ny Fifanarahana Fandriampahalemana natao tamin'ny 16 Janoary 2007, dia namintina fotsiny i JJmar hoe tsy mbola tonga ao El Salvador ny fampihavanana taorian'ny ady. Tamin'ny taona 2006 ireo mpikambana avy amin'ny elatra havanana, antoko ARENA eo amin'ny fitondràna, ahitàna ny filoha amperinasa ary roa amin'ireo telo teo alohany, dia nifamory taminà kianja iray natokana ho an'i Roberto D'Aubuisson, mpanorina ny ARENA sady mpanohana ireo andian'ny mpanatanteraka famonoana avy amin'ny elatra havanana nandritra ireo taona maro nisian'ny ady an-trano. Nihira ny hira faneva tranainin-dry zareo izy ireo, misy ny andàlana hoe “El Salvador no ho fasana hiafaràn'ny Reds.” Fihatsaràna ivelan-tsihy(es) tsotra izao no iantsoan'i Beka Luna azy io rehefa injay ny filoha Tony Saca tonga tamin'ny filazàna ireny fehezanteny ireny, niantso firaisankinam-pirenena, fotoana fohy taorian'ireo fankalazana nasionaly.
Nandalo teny amin'ireo toerana nanaovana fankalazàna i Ixquic, nahita azy ireny voahodidina tariby mandidy, ary nandefa ireo sary nopihany. Sary iray mampihomehy no mampiseho, avy any ambadik'ireo polisy mpandrava korontana, ireo mpanao hetsipanoherana mitondra sorabaventy iray mivaky hoe “la verdadera paz” — “ny tena fandriampahalemana.”
Nanapaka hevitra i Jjmar hilaza fa ny hetsika natao tamin'io andro io dia toy ny hetsika fanokàfana(es) fotsiny ihany ny fampielezankevitra ho an'ny fifidianana tamin'ny 2009. Raha ny marina dia nitaraina izy raha, ho an'ireo Salvadoriàna marobe, hetsika tsy takatra ny saina ny fanaovana sonia ilay Fifanarahana Fandriampahalemana — ny mampiasa loha azy ireo dia ny ho tafody an-trano tsy misy mihetraketraka, ny asa loha momba izay hohanina ampitso ary ny fandoavana ny isam-bolana rehefa tonga ny faran'ny volana
Ireo fankalazàna ny fitsaharan'ny ady an-trano dia niteraka tafatafa maro isankarazany sy fitantaràna avy amin'ilay ady an-trano. Tantara iray no tena nahafaly manokana ny tao El Salvador. Notaterin'ny gazety dizitaly El Faro ny tafa iray niafaovana tamin'i Felipe González Márquez, praiminisitra fahiny tao Espaina, izay namboraka fa nomen'i Fidel Castro azy ny fanadihadiana amin'ny antsipirihany ilay fanafihana tamin'ny Novambra 1989 nataon'ireo mpiady anaty akàtan'ny FMLN teny an-dalamben'i San Salvador. Lazain'i El Visitador fa ny fahanginan'ny praiminisitra espaniola(es) momba ireo fanafihana mbola ataon'ireo mpiady anaty akàta ao andrenivohitra dia mitovy amin'ny fahanfantarana ireo drafitry ny fanafihana tamin'ny 11/09 sy tsy fanaovana na inona na inona hanakànana azy ireny.